जनतामा असन्तुष्टि बढेको महसुस भइरहेको छः मुख्यमन्त्री राई चाँडै मन्त्रिमण्डल विस्तार हुन्छ, प्रदेश सरकारले गति लिन्छ - dsnews
जनतामा असन्तुष्टि बढेको महसुस भइरहेको छः मुख्यमन्त्री राई चाँडै मन्त्रिमण्डल विस्तार हुन्छ, प्रदेश सरकारले गति लिन्छ
7 months ago yamfu
३१ असोज, बिराटनगर । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई पछिल्लो समय मिडियाका ब्ाारेमा बोलेको विषयले आलोचनाको शिकार बने । यसबाहेक पनि उनको मुख्यमन्त्रित्वको मूल्यांकन र समीक्षा बेलाबेलामा भइरहेकै छ । नेपाल सरकारको सूचना तथा सञ्चारमन्त्री एवं प्रवक्तासमेत भइसकेर प्रदेशमा आएका राईलाई अनुभवी मुख्यमन्त्रीका रुपमा हेरिएको थियो । तर, प्रदेश सरकार बनेको सात महिना पुग्दासम्म उनको नेतृत्वले प्रभावकारी काम नगरेको जनगुनासो बढ्न थालेको छ ।
‘अहिले जनतामा अलिकति असन्तुष्टि बढिरहेको छ भन्ने कुरामा मलाई पनि अलिकति महसुस भइरहेको छ’ अनलाइनखबरसँग कुराकानी गर्दै मुख्यमन्त्री राईले भने, ‘संघीय सरकारले पनि राम्रोसँग गति लिन सकेको छैन । यसकारण पनि असन्तुष्टि बढिरहेको छ ।’
प्रदेश सरकार असक्षम भएर होइन कि संघीय सरकारले राम्रोसँग काम गर्न नसक्दा पहिलो आवधिक योजना गुजि्रएको राईको तर्क छ । उनी भन्छन्, ‘विकास बजेटका विषयमा एउटा चौमासिक समय त्यतिकै गु्रजिएको छ । यो प्रदेश सरकारको कारणले होइन, संघबाट समयमै बजेट नआएका कारण यो समस्या आएको हो ।’
प्रदेश १ ले अहिलेसम्म आफ्नो स्थायी राजधानी र नाम तोक्न सकेको छैन । यतिसम्म कि सात महिना बितिसक्दा पनि प्रदेश सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन । बजेट कार्यान्वयनको स्थिति पनि लगभग शून्यजस्तै अवस्थामा छ । आखिर किन प्रदेशको काम प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन ? यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर मुख्यमन्त्री राईसँग अनलाइनखबरले गरेको कुराकानी-
प्रदेशमा सरकार गठन भएको ७ महिना पूरा भइसक्यो, किन अहिलेसम्म जनताले हाम्रो प्रदेशमा सरकार छ र यहीँबाट हाम्रा समस्या समाधान हुन्छन् भन्ने महसुस गर्न नसकेको ?
प्रदेश सरकार छ भन्ने जनतालाई लागिरहेको छ । तर, प्रदेश सरकारले गति लिन सकेन भन्ने कुरा पनि लागेको छ । म बताउन चाहान्छु कि प्रदेश संरचना बिल्कुलै नयाँ संरचना हो, प्रदेश सरकारले पिरामा वा गुन्द्रीमा बसेर काम थाल्नुपर्‍यो । हाम्रो अधिकतम समय बस्ने संरचना खोजी गर्ने र ब्यवस्थापन गर्ने कार्यमै खर्च भयो ।
यही समयमा प्रदेश सरकारले आफनो नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश प्रदेश सभामा पेश गरी त्यसलाई पारित गर्ने काम पनि सम्पन्न गरेको छ । यो जनतालाई थाहा भइसकेको कुरा हो । त्यस अतिरिक्त यस प्रदेशमा प्रदेश सरकार छ र प्रदेशका जनतालाई सुरक्षा, सुशासन र प्रदेशबासीलाई सम्मान दिने कुरामा प्रदेश सरकार छ भन्ने अनुभूति हामीले जनतालाई दिलाएका छौं ।
जनतासँग प्रहरी कार्यक्रम अन्तरगत हामीले नागरिक सचेनता र सुरक्षाका निम्ति घर-घरमा स्टिकर टाँस अभियान प्रदेशभरि सञ्चालन गरेका छौं । यस अभियानबाट प्रदेश सरकार छ, प्रदेश सरकार हाम्रो हो भन्ने कुरा हामीले प्रत्यक्षरपमा जनतालाई अनुभूत गराएका छांै । बिस्तारै प्रदेश सरकारमार्फत हाम्रा समस्या सबै समाधान हुन्छन् भन्ने कुरामा प्रदेशबासीहरु विश्वस्त हुनुहुन्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु ।
संघीय सरकारको असहयोगका कारण प्रदेशमा काम गर्न निकै समस्या भएको भन्ने गुनासो बाहिर आएको छ, अहिलेको स्थिति के हो ?
अहिले मूलतः संविधानको भावना र मर्म अनुसार कर्मचारी संगठन, संरचना हामीलाई आवश्य छ । त्यो संरचना प्रस्तावित पनि गरेका छौं । तर, संघीय सरकारबाट अस्वीकृत भएको अवस्था छ । हामी यतिबेला बाध्य छौं, जुन संरचना संघीय सरकारले तोकेर पठायो, त्यही तोकेको संरचना स्थापना गर्ने र काम गर्ने अहिलेको स्थितिमा प्रदेश सरकार छ ।
तसर्थ पूर्णरुपमा हामीले प्रस्ताव गरेको संरचनालाई स्वीकृति दिएर काम गर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्छ । संघले छिटोभन्दा छिटो ऐन कानुन बनाएर बाटो खोल्नुपर्छ ।
निजामति कर्मचारी लोकसेवा आयोगसँग सम्बन्धित छ । प्रहरी ऐन, राष्ट्रिय स्रोत वित्त आयोगदेखि लिएर साझा सूचीमा रहेका छन् । यसमा प्रदेश सरकारले एक्लै कानुन बनाएर पनि कार्यान्वय गर्न सकिँदैन । तसर्थ संघीय सरकारले यी कुराहरुमा छिटो बाटो खोल्ने र प्रदेश सरकाहरुलाई गतिका साथमा काम गर्नेखालको वातावरण र आधार खडा गरिदिनुपर्छ । संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई कम्तिमा पनि एउटा पिल्लरका रुपमा उभिने वातावरण बनाइदिनुपर्छ नत्र अहिलेको स्थितिमा काम गर्न असहज भएको छ । यसतर्फ संघीय सरकारको ध्यान जान आवश्यक छ । सात प्रदेशलाई सात पिल्लरको माध्यमबाट संघीय सरकार छानोको रुपमा बस्नुपर्छ । अनि समृद्धि उभ्याउनुपर्छ ।
संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई अधिकार प्रत्योजन गर्ने, संरचना तयार गर्ने ऐन कानुन निर्माण गरिदिनेतर्फ तत्काल ध्यान दिनुपर्छ । हामीले आग्रह पनि गरेका छांै । विश्वास छ अब चाँडै यो पूरा हुनेछ ।
संघीय सरकारलाई दोषारोपण गरिरहँदा प्रदेशका अधिकारक्षेत्रभित्रका कामचाहिँ किन प्रभावकारी हुन नसकेको ?
प्रदेश सरकारले संघीय सरकारलाई दोषरोपण गरिरहेको छैन । मात्र, हामीले के भन्ोका छौ भने प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरण हुनुपर्ने अधिकारहरु, हस्तान्तरण भएर आउनुपर्ने संरचनाहरु र कर्मचारीहरु समयमै आउनुपर्‍यो । अर्को कुरा, छिटोभन्दा छिटो संघबाट बन्नुपर्ने ऐन, कानुन र मापदण्डहरु बन्नुपर्‍यो । यसबाट मात्र प्रदेश सरकारको बाटो खुल्छ । प्रदेश सरकारले गतिका साथ काम गर्न सक्छ । प्रदेश सरकारका तर्फबाट हामीले यी कुराहरु राख्दै आएका छौं ।
अर्को कुरा, संविधानले नै सहकार्य समन्वय र सहअस्थित्वको सिद्धान्तमाथि उभिएर तीनवटा तहका सरकारले काम गर भनेर गरेको मार्गनिर्देशनलाई छिटो कार्यानवय गर्नुपर्छ भन्ने करा हामीले उठाउँदै आएका छौं ।
संघीयताको कार्यान्वयका निम्ति प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय एउटा राजनीतिक संयन्त्र बन्नुपर्छ । त्यसको स्थायी सचिवालय बन्नुपर्छ । र, प्रसाशनिक तहमा पनि मुख्यसचिवको नेतृत्वमा एउटा संयन्त्र बनाउन आवश्य छ । यसो भयो भने मात्रै संघीयता कार्यान्वयमा देखिएका चुनौतिलाई समाधान गर्दै संघीय संरचनाका माध्यमबाट सुविधाजनक ढंगबाट राज्यका सबै सुविधाहरुलाई जनताहरुको पहुँचमा पुर्‍याउन सकिन्छ भन्ने कुरा हामीले राख्दै आएका छौं ।
आफ्नो तहमा प्रभावकारी रुपमा काम गर्नका निम्ति हामी गम्भीर छौं । काम गरिरहेका पनि छौं । प्रदेश सरकारले त्यस प्रकारले काम गरिरहेको छ । त्यतिकै संघीय सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने, आलोचना गर्ने, घेराबन्दी वा त्यसप्रकारको दोषारोपण गर्ने काम प्रदेश सरकारहरुले गरिरहेका छैनन् ।
प्रदेश सरकार गठन भएको सात महिना पूरा भए पनि सरकार विस्तारको गाँठो अझै फुक्न सकेको छैन, किन यस्तो ?
सरकारको विस्तारको कुरामा धेरैतिरबाट हामीले सुनिरहेका छौं । शुरुमा सरकारको आकार सानो बनाउन चाहेकै हौं । त्यसबेला खासै कार्यबोध हुने भारहरु थिएनन् । त्यसैले सानो, चुस्त मन्त्रिमण्डल बनाएका हौं । अब भने सरकार बिस्तार गर्ने क्रममा छौं । गाँठो काँही पनि परेको छैन । हामी जतिबेला पनि विस्तार गर्छांै । हामीले हतार नगरेकै हो । विस्तार गर्ने कुराको तयारी गरिरहेका छौं ।
बल्ल प्रदेशको मातहतमा संरचना आएका छन् । अब सबै कर्मचारी आएको अवस्था र प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रय र बजेट कार्यान्वय गर्ने समय बनिसकेको अवस्था रहेपछि मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिनुपर्छ भन्नेमा प्रदेश सरकार पुगेको छ । त्यसकारण अब छिटै बढीमा ११ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल विस्तार गछौं । गाँठो परेकाले अलमल भएको होइन ।
मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरु सभासमारोह, कार्यकर्ता भेला, भवन उद्घाटन जस्ता काममा बढी केन्दि्रत भइरहेको देखिन्छ । अहिले प्रदेशको विकास र समृद्धिका लागि गम्भीर भएर नीति निर्माण गर्ने बेला होइन र ?
केही सभा समारोहमा जानुपर्छ । त्यो एउटा प्रचलन पनि छ । त्यसलाई अहिले नै हामी बन्द गर्न सक्दैनौं । खास खास महत्वपूर्ण कार्यक्रम र सभासमारोहमा जानु पनि पर्छ । त्यसका माध्यमबाट सरकारका नीति कार्यक्रम र आफ्ना योजनाहरु बताउनु पनि पर्छ । त्यसैले जाने काम पनि भइरहेको छ ।
तर, हामीलाई अहिले सुझावहरुपनि आइरहेका छन् कि बढी दौडाहा भयो । साना मसिना कार्यक्रममा समय खचिर्ने कार्य भइरहेको छ भन्ने कुराप्रति म सम्वेदनशील छु । गम्भीर पनि छु । म आफू पनि सचेत छु र मैले यस विषयमा क्याबिनेटका सदस्यहरुलाई भन्दै पनि आएको छु । सचेत गराउँदै आएको छु । त्यसकारण, अब दौडाहाका कुरा, साना मसिना कार्यक्रममा समय खर्चिने कुरा भन्दा पनि आफ्नो मन्त्रालय, विभाग र प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अनि बजेटहरुलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वय गर्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । कानुन निर्माण गर्ने कुरामा, आवश्यक संरचना तयार गर्ने कुरामा अनि विकास र समृद्धिको जनचाहनासँग प्रत्यक्षरुपमा जोडिएर प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढ्ने कुरामा सबै समय खर्चिनुपर्छ भन्नेमा हामी केन्दि्रत भइरहेका छौं ।
समृद्धि हाम्रो मुख्य एजेण्डा हो । यही एजेण्डामा हामी केन्दि्रत छौं । भर्खरैमात्र प्रदेश आवधिक योजनाको पहिलो निर्देशक समितिको बैठक सम्पन्न गरेका छौं । त्यस बैठकबाट आवधिक योजना तर्जुमा गरी क्यालेण्डर बनाएर हामी काममा अघि बढिसकेका छौं । यसरी प्रदेश सरकारको बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वय, प्रदेशको आवधिक योजना तर्जुमा आदि काममा अहिले हामी केन्द्रित भइसकेका छौं ।
प्रदेशसभा र सरकारमा सुविधाजनक बहुमतको स्थिति हुँदाहुँदै पनि प्रदेशको राजधानी र नाम तोक्न सक्नुभएको छैन । यसले तपाईहरुको काम गर्ने शैली र क्षमतामाथि प्रश्न उठ्दैन ?
प्रदेशको नाम र राजधानीको कुरा गर्ने हो भने यस प्रदेशमा नेकपाको स्पष्ट बहुमतको सरकार छ । हामीले निर्णय गर्ने बित्तिकै प्रदेश सभाबाट त्यसलाई टुंग्याउन सक्छांै । तर, गणितमा दुई तिहाई छ भनेर त्यतिकै यो विषयलाई अगाडि बढाउन चाहँदैनौं । यो बिषय अत्यन्तै गम्भीर र जटिल छ । सिंगो प्रदेशको भावना, भौगोलिक वस्तुस्थित र ऐतिहासिक पक्ष सबैलाई केलाएर त्यसमा पनि ९३ जना माननीयज्युहरुको भावनालाई पनि समेट्नुपर्नेछ ।
यही दोस्रो अधिवेशनमा नाम र राजधानीको विषयमा प्रदेश सभामा प्रस्ताव लाने तयारी गरेको थिएँ । तर, सबै राजनीतिक दल र सभामुखज्युको समेत परामर्शमा आगामी हिउँदे अधिवेशनबाट यो विषयलाई टुग्याऔं भन्ने सुझाव आयो । यसले थप समय माग गर्छ भन्ने कुराले सबै दलको सहमतिमा यो विषयलाई टुंग्याउनुपर्छ भन्ने उन्नत स्तरको समझदारी भएको छ । यसलाई सरकारको सफलता वा असफलता, मुख्यमन्त्रीको सफलता वा असफलताभन्दा पनि प्रदेशसभामा उन्नत खालको राजनीतिक संस्कार, सुझबुझ देखिएको छ । यही सोचअन्तर्गत नै यो विषयलाई आगामी हिँउदे अधिवेशनबाट टुंग्याउने समझदारी गरेका छौं । त्यसैले यो विषयलाई प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री र प्रदेश सभाका माननीयहरुको असफलतासँग जोडेर हेर्नु हुँदैन ।
प्रदेश ७ को नाम र स्थायी राजधानीको विषय विवादास्पद बनेको छ । यसबाट प्रदेश १ पनि झस्किएको पो हो कि ?
राजधानी र नामको विषयमा सबै पक्ष संवेदनशील र गम्भीर बन्न आवश्य छ । यो पाँच बर्ष आठ महिना संविधान सभामा खर्च गर्दा पनि टुंगो नलागेको विषय हो । अहिले यो विषय प्रदेश सरकारको थाप्लोमा आएको छ ।
अहिले सतहमा चर्चा भएजजसरी आ-आफ्नै ठाउँमा राजधानी हुनुपर्छ भनेर जिद्दी गरेजस्तो हिसाबमा यो टुंगिने विषय होइन । यो विषयको संवेदनशीलता र गम्भीरतालाई बुझेर हामीले हिमाल, पहाड, तराईको भौगोलिक अवस्थिति, जनसंख्या, विविधता र ऐतिहासिक पक्षलाई ध्यान दिँदै प्रदेश सभाभित्र रहेका राजनीतिक दल र प्रदेशसभा सदस्यको अभिमत हेरेर सहमतिको विन्दु खोज्नुपर्छ । अब सबै राजनीतिक दलले त्यो बिन्दू खोज्नु पर्छ । धनकुटाले धनकुटा हुनुपर्छ, इटहरीले इटहरी हुनुपर्छ ।
बिराटनगरले बिराटनगर हुर्नुपर्छ, गोठगाउँले गोठगाउँ हुनुपर्छ र धरानले धरान हुनुपर्छ भनेर मात्रै हुँदैन । ती ठाउँहरुमा मतदान गरेर मात्रै पनि यो विषय टुंगिन सक्दैन । यो विषयलाई टुंग्याउनका निम्ति एउटा सहमतिको बिन्दु के हुन सक्छ ? त्यसै आधारमा सबै राजनीतिक दल र ९३ जना माननीयहरु एक ठाउँमा उभिन सक्नुपर्छ । त्यही आधारको खोजी गर्नतर्फ सबै राजनीतिक दल र माननीयहरुले समय खर्च गर्नुपर्छ । र, मिडिया लगायत सबै क्षेत्रले सहयोग गर्नुपर्छ ।
यसमा सहज वातावरण निर्माणका लागि उद्योगी व्यवसायी त्यसतर्फ सबै क्षेत्रले योगदान गर्नुपर्छ । हामी ठाउँ विषेशमा खुम्चिएर तर्क र बहस गरेर जाने हो भने यो बिषय हामीले ठीक ढंगबाट टुंग्याउन सम्भव हुन्न । मेरो आग्रह छ, सहमतिको बिन्दू के हुन सक्छ ? धारणा र मत आइसकेपछि भिन्न-भिन्नखालको मत र धारणालाई एउटै बिन्दूमा उभ्याउन मुख्यमन्त्रीले समय खर्च गर्ने हो । हामी साझा बिन्दू तयार गर्न सक्छौं र यो सम्भव छ । आगामी हिँउदे अधिवेशनबाट यी विषयमा टुंग्याउने राजनीतिक दलहरुबीच सम्झदारी बनेको छ । यही सम्झदारीबाट हामी अगाडि बढ्छौं ।
प्रदेश सरकारको विकास खर्च शुन्यको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा भोलिका दिनमा विकास बजेट खर्चै नहुने अवस्था सिर्जना हुने त होइन ?
विकास बजेटका विषयमा हामी संवेदनशील र गम्भीर बनेका छौं । एउटा चौमासिक समय त्यतिकै गु्रजिएको छ । यो प्रदेश सरकारको कारणले होइन, संघबाट प्रदेश सरकार अन्तरगत रहने संरचना नहुँदा समयमै बजेट नआएका कारण यो समस्या आएको हो । कर्मचारी अभावले समस्या भएको हो । बल्ल संघबाट प्रदेश सरकारअन्तर्गत रहने संरचना र कर्मचारी पठाएको अवस्था छ । दशैंसम्म सबै प्रदेशका निर्देशनालय, डिभिजन र विभाग तयार हुनेछन् । र बजेट कार्यान्वयनको काम शुरु हुन्छ ।
प्रदेश सरकारको आफ्नै क्षमता कारण यो चौमासिक समय गुजि्रएकोे होइन । पहिलो अभ्यास भएकाले केही महिना बित्नुलाई अन्यथा लिनु पनि हुँदैन । तयारी र बनीबनाऊ संरचनामा उठेको अवस्थामा यस प्रकारको आलोचना र विरोधको बिषय हुन सक्थ्यो ।
तर, गतिका आधारमा काम गर्ने संरचना बनिसकेकाले अब भने कानुन निर्माण, संरचना निर्माण सँगसँगै जनताको अपेक्षासँग जोडिएर गतिका साथ काम गर्न सक्छौं ।
सदनमा पनि सुविधाजनक बहुमत छ, तर कानुन निर्माणको गति मन्द किन भइरहेको छ ?
मलाई कानुन निर्माणको क्रम मन्दजस्तो लाग्दैन । प्रदेश सभाको दोस्रो अधिवेशन अन्त्य भएको अवस्थासम्म प्रदेश सभा अत्यन्तै सफल भएको छ । सबैभन्दा बढी कानुन निर्माण गर्ने कार्यमा एक नम्बर प्रदेशमै भएकाले यो प्रदेशसभा अत्यन्तै क्रियाशील र सफल भएको छ ।
हामी सबैभन्दा बढी कानुन बनाउने प्रदेशमा पर्छांै । सरकार कानुन निर्माणप्रति अत्यन्तै सम्वेदनशील छ । कानुन निर्माणलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ । हामीले २३ वटा विधेयकहरु प्रदेशसभाबाट पारित गर्न सफल भएका छांै । अरु कानुनका मस्यौदा तयार भएका छन् । कतिपय विचाराधीन अवस्थामा छन् ।
त्यसकारण सुविधानजनक बहुमत रहेको सरकारले सबै प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुलाई समेत सहमतिमा लिएर अघि बढेका छांै । त्यसैले यति धेरै कानुन बनाउन प्रदेश सरकार सफल भएको छ ।
प्रतिपक्षको भन्दा बढ्ता जनता तपाईँहरुको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्ट देखिन्छन्, यसले भविश्यमा संघीयतामाथि नै प्रश्न उठाउने अवस्था आउने त होइन ?
जनतामा असन्तुष्टि हुनुलाई म स्वाभाविक ठान्छु । किनभने तीन तहको सरकार गठनपछि फटाफट जनताका आशा र अपेक्षा पूरा हुन्छन भन्ने थियो । तर, जनताले चाहेजस्तो फटाफट काम हुन सक्दैनन् । कानुन, नीति, कार्यक्रमअन्तर्गत जनताका आशा र अपेक्षाहरुलाई पूरा गर्दै जानुपर्ने हुन्छ ।
जहाँसम्म्ा अहिले जनतामा अलिकति असन्तुष्टि बढिरहेको छ भन्ने कुरामा मलाई पनि अलिकति महसुस भइरहेको छ । यसकारण कि संघीय सरकारले पनि राम्रोसँग कदम चालिरहेको छैन । गति लिन सकेको छैन । यस कारण पनि असन्तुष्टि बढिरहेको छ । प्रदेश सरकार पनि कार्यकारी रुपमा जान नसकिरहेको आदि अवस्थाले जनतामा असन्तुष्टि बढिरहेको देखिन्छ ।
तर यसप्रति प्रदेश सरकार सचेत र गम्भीर छ । र, हामी यो संघीयतालाई जसरी भए पनि कार्यान्वय गरेर छाड्छौं । यसको विकल्प छैन । केही चुनौती र आशंकाहरु छन्, तर हामी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको राम्रो सहकार्य र समन्वय कायम गरेर संघीयतालाई कार्यान्वय गर्ने पक्षमा छौं ।
संघीयतामाथि पुनविचार हुने कुरा,संघीयता असफल हुने कुरा र संघीयता लागु हुन्न कि भन्ने कुरा बिल्कुलै हुनै सक्दैन । किनभने, संघीयताले नै नेपाल राष्ट्रलाई बलियो बनाउँछ । हिमाल पहाड र तराईलाई जोड्छ । सबै जातभात, भाषासंस्कृति भन्ने समुदायलाई जोड्छ । सबैको पहिचान, पहुँच र प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गराउने र राज्यका सबै सेवा सुविधाको पहुँचलाई जनतासँग जोडने काम संघीयताले गर्छ । यही कारण हामीले संघीयतालाई अपनाएका हौं । त्यसकारण संघीयता नेपालको समुन्नतिका लागि अपरिहार्य छ । त्यसैले संघीयतामाथि पुनःविचार हुन्छ वा असफल हुन्छ कि भन्ने कुरा हुनै सक्दैन ।
प्रदेश सरकारको अबको कार्ययोजना कस्तो छ ?
बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि एक्सन प्लान तयार गरेका छौं । आवधिक योजना तयार गर्ने र नयाँ अवधारणाबाट काम गर्न खोजिरहेका छौं ।
पहिलो योजनाका रुपमा बृहत बिराटनगरको अवधारणा अघि सारेका छौं । बृहत बिराटनगर क्षेत्रभित्र १० वटा नगरपालिका र पाँचवटा गाउँपालिका समेटिने छन् । त्यसभित्र चार लेनको सडकको चक्रपथले घेर्ने कुरा छ । त्यसभित्र योजनावद्ध आधुनिक विकासलाई अगाडि बढाउने योजना रहेको छ । सेटेलाइट सिटी, स्मार्ट सिटी र औद्योगिक सिटीको अवधारणाबाट अब प्रदेश सरकार अगाडि बढ्ने छ ।
बृहत बिराटनगरभन्दा बाहिरका क्षेत्र सिटीलाई पनि यसैप्रकारको नयाँ मोडल तयार गरी विकास गर्ने योजनामा सरकार रहेको छ । पहाडि जिल्लाहरु पनि, जो बिकासमा पछाडि छन्, तिनको पनि बिकासका लागि नयाँ मोडालिटीबाट आगाडि जानुपर्छ भन्ने हिसाबबाट हामी कामहरु थालिरहेका छौं र आवधिक योजनामा जुटिसकेका छौं ।
पाँच बर्षे र १० बर्षे योजना बनाएर त्यसको काम देखिने गरी योजना बनाउन र त्यसलाई कार्यान्वय गर्ने योजनामा प्रदेश सरकार छ ।
६/८ महिना लाग्दा योजना तयार गर्ने र त्यसपछि प्रदेश १ को ठोस बिकास र समृद्धिको मोडल बोकेर प्रस्तुत हुन्छौं । प्रदेश १ लाई १ नम्बर नै बनाउन सम्पूर्ण शक्ति र सामथ्र्य खर्च गरिरहेका छौं । सोहीअनुसार प्रदेश सरकार आगामी दिनमा प्रस्तुत भएको देख्नुहुनेछ ।
साभार : अनलाइनखबर
Previous दसैँमा बढेको छ । पछिल्लो ५ दिन यता गाडी दुर्घटनामा ३४ जनाले ज्यान गुमाएका छन् ।
Next टीका लगाउनेहरुको मन्दिर परिसरमा भीड लागेको छ ।
चण्डीपुर्ने मेला (बुद्ध जयन्ती)
5 days ago yamfu
केन्द्र सारिएको विरोधमा गाउँपालिकाको कार्यालयमा तालाबन्दी
विदेशबाट फर्कनेलाई विमानस्थलमा कडाइ गर्न लागेपछि रिसले आगो हुँदै यस्तो स्टाटस लेखिन रेखा थापाले
3 months ago yamfu
हजुरबुबा हजुराआमा दिवस
5 months ago yamfu
जापानले अब सित्तैमा नेपाली कामदार लैजाने ! यस्तो हुनेछ प्रक्रिया …पूरा हेरि शेयर गरौ
रेक्टरको भूकम्प आउने खतरा छः वैज्ञानिक सचेतको लागि
The brand new Angle On Assistance With Writing Paper Simply Released
Jake accompanied them
you have to treat it just like any other day
You realize that when most people
Lube It Up did exactly
2 hours ago yamfu
3 hours ago yamfu
4 hours ago yamfu
Download Latest Cisco 400-201 Certification Exam
Most Accurate Magento M70-101 Prep Guide Is Updated Daily
6 months ago yamfu